ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဆံပင်နှင့် မိတ်ကပ်ပညာရှင် ဆရာများ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့အခမဲ့ ပညာသင်ကြားပေးမည့် "International Hair & Beauty Myanmar - IHBM 2020" - Amazing Yangon
Home /Featured, Promotion/ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဆံပင်နှင့် မိတ်ကပ်ပညာရှင် ဆရာများ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့အခမဲ့ ပညာသင်ကြားပေးမည့် “International Hair & Beauty Myanmar – IHBM 2020”
Dcash Professional ဟာဆိုရင်ဖြင့် နိုင်ငံခြားမှ ဆံပင်မိတ်ကပ်ပညာရှင်များနဲ့ပညာဒါနသင်တန်းတွေကို မကြာခဏဆိုသလိုအမြဲပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ တာဆိုရင် အကြိမ်ပေါင်းမနည်းတော့ ပါဘူးနော်……😍
🤗 Dcash Professional ရဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆံပင်မိတ်ကပ် ပညာဒါနပွဲဆိုရင်ဖြင့် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ဆံပင်/မိတ်ကပ် ၀ါသနာရှင်အမြောက်အများ နှင့် အလှပအရေးရာစိတ်ဝင်စားသူများက စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ လာရောက်လေ့လာကြတယ်ဆိုတာ
☝ အခုလဲ ဒီဇင်ဘာရဲ့ ဆောင်းအငွေ့ အသက်လေးတွေနဲ့ အတူတူ Dcash Professional / LIFEFORD- PARIS နှင့် I H B M***မှ ကြီးမှူးပြီး “နိုင်ငံတကာဆံပင်နှင့် မိတ်ကပ်ပညာဒါနပွဲတော်ကြီး”ကိုပြုလုပ်ကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အမျိုးမျိုးကို Discount Up to 30% / Up To 40% off တွေနဲ့ 
့BUY-1~GET-1 / BUY-2~GET-1 စသည့်အခွင့်အရေးများအပြင် လာရောက်အားပေးသည့် ချစ်တို့ ကိုလဲ Dcash~Lifeford ရဲ့ ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲများလဲ ကံစမ်းပေးသွားမှာပါနော်………. 🤗
ပညာဒါနသင်တန်း နှစ်ရက်စလုံး တက်ရောက်သူတိုင်းကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဆံပင်ပညာရှင်များအသင်းရဲ့ ဥက္ကဌလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ သင်တန်ဆင်း Certificate ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး…👑
🇹🇭 ထိုင်းနိုင်ငံမှ နာမည်ကျော် International Model များပါဝင်တဲ့ Lastest Hair Fashion Show များကိုလဲ လေ့လာခွင့်ရမှာပါနော်…..🇹🇭
☝ အစီအစဉ်များအနေဖြင့် 
Hair & Make up Free training
Hair & make up Show
စသည့်အထူးအစီစဉ်တွေ ပါဝင်ပါသေးတာမို့ အားလုံးပညာလည်းရ
Discount % ရလက်ဆောင်တွေလည်းရ
ဆိုတော့ချစ်တို့ အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်……..🤗
နေ့ ရက် ~ ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက် မှ (၁၀)ရက်နေ့ ထိ။
နေရာ ~ Gandamar Grand Ballroom ဂန္ဓမာ ဟိုစေး -ဂန္ဓမာလမ်း နှင့်ဝေဇယန္တာလမ်းထောင့် -မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
အချိန် ~ နံနက် ~ (9:00 AM To 5:00 Pm)
❤❤❤ဆံကေသာမြတ်နိုးသူတိုင်းအတွက် #Dcash ❤❤❤
Best 149 Company အခွဲတခုဖြစ်တဲ့ Beauty Net Trading Company မှ
ထိုင်းနိုင်ငံမှ တင်သွင်းထားတဲ့ Dcash Professional Hair Care Product, Lifeford Paris Cosmetics & XCute Me Cosmetics များကို လက်လီ လက်ကားဖြန့်ချီရောင်းချ ပေးနေပါတယ်..
Office – အမှတ်၆၆၊ သမာဓိလမ်း၊မရမ်းကုန်း(၈)ရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊
+95-1-657756, 657675, 656575
Hot Line No : 09 424 70 70 10
#Dcash အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိစေဖို့ Dcash Myanmar Page လေးကို Like လုပ်ထားလိုက်ပါနော်…..
#Dcash_Professional #Lifeford_Paris #Detox_Hair_Treatment #Hair_Style #Dcash_Myanmar #3D_Defender_Hair_Treatment #Dcash_shampoo
#Sunshine And Platinum
🇹🇭 ထိုငျးနိုငျငံမှ ဆံပငျနှငျ့ မိတျကပျပညာရှငျ ဆရာမြား ကိုယျတိုငျ လကျတှအေ့ခမဲ့ ပညာသငျကွားပေးမညျ့
“International Hair & Beauty Myanmar – IHBM 2020″🇹🇭
😘 ခဈြတို့ ရေ မင်ျဂလာပါနျော
Dcash Professional ဟာဆိုရငျဖွငျ့ နိုငျငံခွားမှ ဆံပငျမိတျကပျပညာရှငျမြားနဲ့ပညာဒါနသငျတနျးတှကေို မကွာခဏဆိုသလိုအမွဲပွုလုပျကငျြးပခဲ့ တာဆိုရငျ အကွိမျပေါငျးမနညျးတော့ ပါဘူးနျော……😍
🤗 Dcash Professional ရဲ့ နျိုငျငံတကာ ဆံပငျမိတျကပျ ပညာဒါနပှဲဆိုရငျဖွငျ့ အနယျနယျ အရပျရပျမှ ဆံပငျ/မိတျကပျ ၀ါသနာရှငျအမွောကျအမြား နှငျ့ အလှပအရေးရာစိတျဝငျစားသူမြားက စညျးကားသိုကျမွိုကျစှာ လာရောကျလလေ့ာကွတယျဆိုတာ
☝ အခုလဲ ဒီဇငျဘာရဲ့ ဆောငျးအငှေ့ အသကျလေးတှနေဲ့ အတူတူ Dcash Professional / LIFEFORD- PARIS နှငျ့ I H B M***မှ ကွီးမှူးပွီး “နိုငျငံတကာဆံပငျနှငျ့ မိတျကပျပညာဒါနပှဲတျောကွီး”ကိုပွုလုပျကငျြးပသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။
အရညျအသှေးအမွငျ့ဆုံး ဆံပငျပုံသှငျးစကျအမြိုးမြိုးကို Discount Up to 30% / Up To 40% off တှနေဲ့ 
့BUY-1~GET-1 / BUY-2~GET-1 စသညျ့အခှငျ့အရေးမြားအပွငျ လာရောကျအားပေးသညျ့ ခဈြတို့ ကိုလဲ Dcash~Lifeford ရဲ့ ဗလာမပါ ကံစမျးမဲမြားလဲ ကံစမျးပေးသှားမှာပါနျော………. 🤗
ပညာဒါနသငျတနျး နှဈရကျစလုံး တကျရောကျသူတိုငျးကို ထိုငျးနိုငျငံမှ ဆံပငျပညာရှငျမြားအသငျးရဲ့ ဥက်ကဌလကျမှတျရေးထိုးထားတဲ့ သငျတနျဆငျး Certificate ခြီးမွှငျ့ပေးသှားမှာဖွဈပွီး…👑
🇹🇭 ထိုငျးနိုငျငံမှ နာမညျကြျော International Model မြားပါဝငျတဲ့ Lastest Hair Fashion Show မြားကိုလဲ လလေ့ာခှငျ့ရမှာပါနျော…..🇹🇭
☝ အစီအစဉျမြားအနဖွေငျ့ 
စသညျ့အထူးအစီစဉျတှေ ပါဝငျပါသေးတာမို့ အားလုံးပညာလညျးရ
Discount % ရလကျဆောငျတှလေညျးရ
ဆိုတော့ခဈြတို့ အားလုံးကိုဖိတျချေါလိုကျပါတယျနျော……..🤗
နေ့ ရကျ ~ ဒီဇငျဘာလ(၉)ရကျ မှ (၁၀)ရကျနေ့ ထိ။
နရော ~ Gandamar Grand Ballroom ဂန်ဓမာ ဟိုစေး -ဂန်ဓမာလမျး နှငျ့ဝဇေယန်တာလမျးထောငျ့ -မရမျးကုနျးမွို့နယျ။
အခြိနျ ~ နံနကျ ~ (9:00 AM To 5:00 Pm)
❤❤❤ဆံကသောမွတျနိုးသူတိုငျးအတှကျ #Dcash ❤❤❤
#Beauty Net Trading Company အကွောငျး
Best 149 Company အခှဲတခုဖွဈတဲ့ Beauty Net Trading Company မှ
ထိုငျးနိုငျငံမှ တငျသှငျးထားတဲ့ Dcash Professional Hair Care Product, Lifeford Paris Cosmetics & XCute Me Cosmetics မြားကို လကျလီ လကျကားဖွနျ့ခြီရောငျးခြ ပေးနပေါတယျ..
Office – အမှတျ၆၆၊ သမာဓိလမျး၊မရမျးကုနျး(၈)ရပျကှကျ၊ ကမ်ဘာအေးဘုရားလမျး၊
#Dcash အကွောငျးကို ပိုမိုသိရှိစဖေို့ Dcash Myanmar Page လေးကို Like လုပျထားလိုကျပါနျော…..
ရုံးဝနျထမျးမြား ကိုယျခံပညာလိုကျစားသငျ့သညျ့ အခကျြ ၅ ခကျြ